Ithegi: inkcazo | Martech Zone
Kutheni abathengisi befuna i-CMS kwizixhobo zabo kulo nyaka
NgoLwesibini, Matshi 14, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 UStephen Morgan
Abathengisi abaninzi kwilizwe liphela bajongelwa phantsi isibonelelo sokwenyani esinokubanikwa yiNkqubo yokuThengisa uMxholo (i-CMS). La maqonga amangalisayo abonelela ngobutyebi bexabiso elingafunyanwanga elingaphaya kokuvumela nje ukuba benze, basasaze kwaye babeke esweni umxholo kuwo wonke amashishini. Yintoni iCMS? Inkqubo yolawulo lomxholo (i-CMS) liqonga lesoftware elixhasa ukwenziwa kunye nokulungiswa komxholo wedijithali. Iinkqubo zolawulo lokuqukethwe zixhasa ukwahlulwa komxholo kunye nenkcazo-ntetho. Iimbonakalo
Yintoni ukuThengisa okuDibeneyo?
NgoMvulo, Septemba 10, 2007 NgoLwesine, uJuni 11, 2015 Douglas Karr
Umhlobo olungileyo, uPat Coyle, uyabuza, Yintoni intengiso yokuNxibelelana? I-Wikipedia inenkcazo elandelayo: Ukuthengisa okusebenzayo kubhekisa kwindlela eguqukayo yentengiso apho ukuthengisa kuye kwasuka kumzamo osekwe kwintengiselwano kwincoko. Inkcazo yentengiso yokusebenzisana ivela kuJohn Deighton eHarvard, othi intengiso yokusebenzisana kukwazi ukujongana nomthengi, khumbula into ethethwa ngumthengi kwaye uthethe nomthengi kwakhona ngendlela ebonisa ukuba sikhumbula oko
Monday, September 10, 2007 Thursday, June 11, 2015
Yintoni iBailiwick yakho?
NgoLwesine, Novemba 17, 2005 NgoLwesibini, Oktobha 21, 2014 Douglas Karr
Igama elihle. Umhlobo wam wayisebenzisa xa wayethetha ngokuqina kwenkampani. Ukusuka kwiDikishona.com: isibizo sebailiwick, esibizwa [bey-luh-wik] Indawo yomntu ethile yomdla, ubuchule, okanye igunya. I-ofisi okanye isithili somgcini-mali.